Global Voices teny Malagasy » Fandraisam-peo ny ôrikesitra saifônika virtoaly voalohany ataon’ny Youtube · Global Voices teny Malagasy » Print
Fandraisam-peo ny ôrikesitra saifônika virtoaly voalohany ataon'ny Youtube
Voadika ny 05 Desambra 2008 20:20 GMT 1	 · Mpanoratra Suzanne Lehn Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
YouTube izao no mikononkonona zava-baovao ho fiaraha-mietana: Manasa ny mpahay mozika manerantany ity orinasa ity mba halaina feo (sy sary) amin'ny fananganana orikesitra saifônika avy amin'ny vazantany efatra virtoaly voalohany . Manana fotoana hatramin'ny faha28 ny volana janoary 2009 ho avy izao na ny mpankafy tsotra na ny matihanina amin'ny resaka mozika hisintona ny taratasin'ny taindalitra sy hampiseho amin'ny alalan'ny lahatsary (vidéo) izay halefany amin'ny alalan'ny serasera ny talentany (sy ny fahaizany).
Ao amin'ity dokambarotra amin'ny alalan'ny lahatsary  ho an'ny ôrikesitra ity no ahitanao, ilay mpamoron-kira Shinoa Tan Dun  (Tadidio ilay sarimihetsika, “Tigra mipetraka, Dragona miafina (Crouching Tiger, Hidden Dragon”?)) sy mpahay mozikamaro hafa no manasa anao: “Miaraha aminay!”. Efa vonona amin'ny fiteny mihoatra ny 12 moa ny antso.
Raiso ny anjara toeranao eo amin'ny tantaran'ny mozika ary midira ao amin'ny Ôrikesitra saifônika YouTube. Mandefa lahatsary roa an-tserasera ihany no ilainao: ny fandraisanao anjara amin'ny hiran'i Tan Dun sy fampihainoana (fampisehoana) hira iray amin'ny ankapobeny.
Toy izao no atao .
1. Miomàna – Safidio ny zavamanenonao eo ampijerena ny taratasin-tain-dalitra ary dia mitendre araka ny tendren'ny mpibaiko hira
2. Atolory – Alefaso an-tserasera ny fahaizana aman-talentanao dia atolory azy ireo hahafahanao miditra amin'ny Ôrikesitra saifônika YouTube
3. Tsidiho – Iseraserao ny lahatsary maro hahazoanao hevitra ary araho ny fifaninanana.
Hanao ny fifantenana voalohany ny mpahay mozika matihanina, mialoha ny fifidianan'ny mpijery izay hotontosaina amin'ny Febroary 2009. Ny tanjona dia ny fampisehoana tena miseho vatana izay hotontosaina any amin'ny trano malalaky Carnegie Hall, any New York, amin'ny faha-15 Aprily 2009, izay tarihan'i Michael Tilson Thomas, talen'ny mozika ao amin'ny Ôrokesitry San Francisco.
Raiso ary ny zavamanenonao dia lasa izao!
(soratry ny mpandika teny: raha tonga dia miseho any aminareo io lahatsary dokambarotra io dia ilazao eto ihany aho satria tsy fantatro mihitsy io fa nampidiriko anjambany fotsiny. Dia mety hihomehy anankampo ihany aho satria mandefa ho anareo zavatra tsy hitako veroka akory)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/05/1409/
 orikesitra saifônika avy amin'ny vazantany efatra virtoaly voalohany: http://www.youtube.com/symphony
 dokambarotra amin'ny alalan'ny lahatsary: http://fr.youtube.com/watch?v=-T_SryRAXuw